निदाएका बेला किन मानिस झस्किने, चिच्याउने र रुने गर्छन् ?
जनतापाटी मंगलबार, साउन १४, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । कोही व्यक्तिहरु निदाएको बेला झस्किने, चिच्याउने, रुने गर्छन् । निदाएको बेला कसैले आक्रमण गरेको देख्नु, घाँटी थिचेको देख्नु, उचाईबाट लडेको देख्दा मानिसहरु एक्कासी आत्तिँदै बिउझिने गर्छन् । यसको मुख्य कारण हाइपनिक जर्क वा स्लीप स्टार्टर जस्ता समस्या हुन सक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । साथै उत्तानो परि छातीमा हात राखेर सुत्दा, उत्तर सिरानी गरे र सुत्ने मानीसहरुमा पनि यि लक्षण हुन्छ भनी धर्मशास्रमा बताएको छ ।
हाइपनिक जर्क वा स्लीप स्टार्टर कुनै रोग होइन । र, यो कुनै पनि नर्भस प्रणालीको डिसअर्डर पनि होइन । यो निदाएको र बिउँझिदाको समयबीचको अवस्था हो । कम निदाएको समयमा झट्का बढी महसुस हुनेगर्छ । यस्ता सपना देख्ने समय भनेको बिहानी पख को एक प्रहर हो। यो जसको दिमागको नसा साँघुरो हुन्छ त्यसको दिमागको प्रतिक्रिया हो ।
निन्द्रामा मानिसहरु जे देख्छन् त्यही सत्य मान्छन् र निद्रामा सम्हालिन सक्दैनन् । जसको कारण त्यस्ता गतिविधि देखाउँछन् । हाइपनिक जर्कको मुख्य कारण भने तनाव, चिन्ता, थकान, क्याफिनको बढी प्रयोग र कम निद्राको कारण दिमागले आराम पाउँदैन र यस्ता विविध प्रतिक्रिया दिन्छ। यो समस्या बंशाणुगत पनि हुनसक्छ । यद्यपि, यो समस्या दिमागलाई आराम नपुग्दा नै देखिने गर्छ ।
मध्यपान तथा धुमपान, आइरनको कमिका कारण मांसपेशीमा ऐठन हुन्छ र निन्द्रामा झट्का लाग्छ । साथै, यस्ता समस्या उत्तेजक औषधिको सेवनले पनि हुन्छ। धेरै समय शारीरिक व्यायाम गर्ने मानिसहरुमा पनि यस्तो समस्या देखिन सक्छन् । धेरै व्यायाम गर्ने मानिसहरुको दिमागको आधा भाग सक्रिय रहन्छ । जसले निन्द्रामा झट्का महसुस गराउँछ। अप्ठ्यारो गरेर सुत्दा पनि ऐठन हुन्छ ।
इपनिक जर्क बाट कसरी बच्ने त ?
आवश्यताअनुसार निन्द्रा पूरा गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । समयमा सुत्ने र समयमा नै उठ्ने गर्नुपर्छ । उत्तानो परेर नसुत्ने, नुहाउँनु भन्दा पहिले मनतातो पानीमा नुहाउँदा यस्ता समस्या कम हुन्छन् , सुत्दा उत्तर सिरानी गरेर नसुत्ने साथै यिनै तरिकामा ध्यान दिएमा यस्ता समस्याबाट बच्न सकिन्छ । यसका लागि सोल्जर पोजिशन मा सुत्नुपर्छ । जसको लागी ढाड सीधा पार्ने र दायाँबायाँ दुवै हात राखेर सुत्न सकिन्छ । शवासनमा प्रयोग हुने यो तरिकाले ढाडको हड्डी सीधा रहन र पेटमा एसिड बन्न नदिन मद्दत पनि गर्छ । क्यफिन जन्य पदार्थ कफि, चिया र सोडा जस्ता पेयपदार्थ सुत्नुभन्दा पहिले पिउँनुहँदैन ।
साँझ आवश्यकता अनुसार पानी पिउने गर्दा रातको समयमा राम्रोसँग निन्द्रा लाग्ने र डिस्अर्डरलाई कम गर्नको लागि धेरै गुलियो खानेकुराले निन्द्रा बिगार्छ । त्यसैले नुन वा गुलियो खानेकुरा कम खानेगर्नुपर्छ । निदाउँनुअघि फलफूल वा तरकारी खान सकिन्छ भने खानेकुरा खादा आइरन, म्याग्नेसियम र क्याल्सियमयुक्त खाना खानुपर्छ । आइरनको कमि पूरा गर्न नियमित दुध, दही, केरा र किसमिस खान सकिन्छ र यस्तो समस्याबाट बच्न सकिन्छ ।
अष्ट्रेलियालाई दक्षिण अफ्रिकाले दियो सामान्य लक्ष्य ३७ मिनेट पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५१३ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु ५४ मिनेट पहिले